Oz को विजार्ड - Emerald सिटी रोड | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त! Oz को विजार्ड - Emerald सिटी रोड | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त!
Oz को विजार्ड - Emerald सिटी रोड
Oz को विजार्ड - Emerald सिटी रोड एक कुनै जम्मा मुक्त spins मूल आधारित एक अद्वितीय विषय संग खेल 1939 एउटै शीर्षक फिलिम चलचित्र. यो परी कथा थिम्ड स्लट खेल बाट जीत नौ सक्रिय शर्त तरिका संग तीन रील छ. को रील प्रसिद्ध पहेंलो ईटा सडक ठूलो Emerald सिटी प्रमुख को एक सुन्दर सुंदर पृष्ठभूमि सेट छन्. तपाईंले मौलिक चलचित्र स्कोर लिइएका केही हँसिलो संगीत सूची सक्नुहुन्छ. खेल ठूलो विजार्ड फेला जवान केटी Dorothy र उनको खोज को एक रंगीन र adventurous यात्रा प्रदान गर्दछ. खेल £ 70 प्रत्येक स्पिन गर्न 35p एक सट्टेबाजी सीमा छ.
Emerald सिटी रोड - Oz को विजार्ड विकासकर्ता बारेमा
यो अद्भुत कुनै जम्मा मुक्त spins एक लोकप्रिय परी कथा चलचित्र आधारित स्लट खेल वैज्ञानिक द्वारा सिर्जना गरिएको थियो. विशाल अनुभव र अधिक को दुई दशकमा संग 250 खेल सिर्जना हालसम्म, आफ्नो नम्बर बस हरेक महिना ठूलो बढ्दै छ. तिनीहरूले संसारमा शीर्ष दस प्रमुख विकासकर्ताहरूले को मा अहिले.
यो को प्रतीक कुनै जम्मा मुक्त spins खेल खेल लोगो हुन्छन्, Emerald शहर दृश्य, रातो नम्बर 7, डबल पल्ट, तीन बार र एकल पल्ट प्रतीक. प्रतीक मूल्यवान शीर्ष तिर्ने खेलको लोगो छ 143 संग रील यसको प्रकारको अवतरण तीन तपाईंको कुल शर्त मात्रा मा पटक. तपाईं बोनस सुविधाहरू देखि जीत मदत गर्न अन्य दुई प्रतीक हो. तिनीहरूले हरियो Emerald पत्थर र Emerald शहर सडक छन्.
जंगली बोनस: को Emerald शहर दृश्य को प्रतीक यो जंगली छ कुनै जम्मा मुक्त spins खेल. जंगली बोनस Emerald पत्थर प्रतीक लागि बाहेक स्लट को सबै प्रतीक लागि जंगली छ.
स्क्याटर विशेषता: हरियो Emerald पत्थर को प्रतीक यहाँ स्क्याटर छ. तीन वा रील यसको प्रकारको थप, तपाईंले केही बोनस खेल ट्रिगर गर्न सक्नुहुन्छ. त्यहाँ सात विभिन्न बोनस छन् र तपाईं अंधाधुंध सम्मानित गरिनेछ तिनीहरूलाई कुनै पनि एक. तिनीहरूले यस्तो टाँसिएको wilds रूपमा बोनस समावेश, multipliers, मुक्त spins, नगद पुरस्कार, धेरै पुरस्कार र रोमाञ्चक अन्य आश्चर्य. यी बोनस गर्न पटक कुनै पनि नम्बर पुन ट्रिगर गर्न सक्नुहुन्छ.
सारांश: बाट जीत बोनस आश्चर्य को एक भीड संग, यो कुनै जम्मा मुक्त spins स्लट खेल तीन रील ढाँचा को श्रेणी मा सबै भन्दा राम्रो छ. यो खेलको प्लेयर गर्न फिर्ती छ 96% जो राम्रो यो जस्तै स्लट लागि राम्रो छ.